ကောလိပ်ကျောင်းသူငယ်ချင်းများ၏ကုမ္ပဏီအတွက်ခရီးသွားသည့်အခါ, တစ်ဦးခရီးစဉ်ရှိသည်နှင့်မယ့်အလိုအလျောက်ဖြစ်မဿုံအဆင်ပြေထိုသို့. အဘယ်သူမျှမမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူနေရာတစ်နေရာသို့မဟုတ်မည်သည့်ကြိုတင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအလည်ခရီးအမှန်တကယ်ဝှက်ထားသောဘဏ္ဍာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာပျော်စရာနှင့်ဆင်ဆာပိတ်ထားသောဝက်ဆိုက်များပေါ်မှရှာဖွေရေးအတွက်လုံလောက်သောအခန်းကအရွက်. ဒါကြောင့်, တင်းကျပ်စွာစာရင်းပြုစရာမလိုဘဲစစ်မှန်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများပြုလုပ်လိုပါကသင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်မည်နည်း? သင်ဘယ်လိုကွာဝေးရာကိုအကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိရှာတှေ့နိုငျ? သင်၏ရွေးချယ်မှုများကဘာလဲ?
အသစ်ကမြို့၌သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးနေ့၌ရှာရန်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်. သူတို့ကအလွယ်တကူရှာကြသည် – ကိုယ့်ကိုသင်ပထမဦးဆုံးညဥ့်ဖြုန်းပါလိမ့်မည်ဟိုတယ်အတွက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များကိုမေး, ဒါမှမဟုတ်သင်ကသင်၏ဘော်ဒါဆောင်ထဲတွင်ရှာတွေ့အခြားကျောင်းသားခရီးသွားများအတွက်ထံမှမေးလျှောက်. အင်တာနက်ပေါ်တွင်အမြန်ရှာဖွေခြင်းသည်သင့်အားကောင်းကျိုးတစ်ခုရှာဖွေရန်လည်းကူညီလိမ့်မည် အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီး. အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုအဓိကအားဖြင့်တာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်ကြောင်းမှတ်ချက်, သင်ဘတ်ဂျက်ငွေအနည်းငယ်ချွေတာခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် gu ည့်လမ်းညွှန်များလှည့်လည်ကြည့်ရှု.
သင်တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပါဘဲလမ်းတွေပေါ်မှာလှည့်လည်ချင်ကြပါဘူး အကယ်., အဘယ်ကြောင့်ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်ရပ်မတက်? ကုန်သွယ်ရေးဝိုင်းများအတွက်န်းကျင်ကိုမေး, အနုပညာပြပွဲ, ဖျော်ဖြေပွဲ, သို့မဟုတ် ပွဲတော်များ သူတို့ကိုမဆိုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံ. သငျသညျအားကစားကိုချစ်လျှင်, အားကစားကွင်းကိုသွားပါ ဒါမှမဟုတ်လမ်းပေါ်ကဘောလုံးပွဲကိုသွားမယ်. သူတို့ဧညျ့အလုံအလောက်ရှိပါတယ်လျှင်သင်ဒေသခံတွေနှင့်အတူကစားပင်နိုင်ပါတယ်. ဤသည်ကိုသင်မြို့၏နက်ရှိုင်းတဲ့ရှုထောင့်ပေးခြင်းနှင့်သင်ဒေသခံများနှင့်အတူအပြန်အလှန်နဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ရုန်းကန်မှုများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် – ဒေသခံတစ်ဦးနဲ့တူ. သင်သည်သင်၏အပြေးစွမ်းရည်ကိုယုံကြည်စိတ်ချလျှင်မာရသွန် Run. သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်က ပို. ပင်ပျော်စရာစေမည်.
ကောက်ချက်ချရန်, နေ့တိုင်းရည်မှန်းချက်ကြီးငယ်ရွယ်ကောလိပ်ခရီးသွားများအတွက်မဆိုအုပ်စုအတွက်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. ကိုယ့်အဘို့သင့်လျော်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများ ကျန်းမာရေးနှင့်ခရီးသွားအာမခံ, ဒါပေမယ့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန့်သတ်မထားပါ. သင့်ရဲ့စပ်စုငယ်ရွယ်မိမိကိုယ်မိမိစူးစမ်းလေ့လာကြစို့နဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါးကြိုက်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်မှသင်၏ရထားလက်မှတ်တွေအမိန့် တစ်ဦးကရထား Save.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “အကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အတူကောလိပ်အိမ်ထောင်ဖက် Exploring” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fdiscoveries-college-mates%2F%0A%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ကောလိပ် ကောလိပ် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ ခရီးသွား Travelingtips